ओली–प्रचण्ड भिडाएर नेकपाबारे भ्रम फैलाउनेहरुले बुझ्नै पर्ने तथ्य « Janata Times
ओली–प्रचण्ड भिडाएर नेकपाबारे भ्रम फैलाउनेहरुले बुझ्नै पर्ने तथ्य
पार्टी मजबुत र एकताले तार्किक निश्कर्ष पाउँदा अहिले कुनै अवसर वा भाउ नपाएकाहरुले आगामी केही दशकसम्म पटक पटक अवसरै अवसर पाउनेछन् । तर एकतालाई खल्वल्याउन खोज्दा कसैले कुनै अवसर त के देउवाको भाषामा कम्युनिस्टहरुले बाहिर निस्केर रुन पनि नपाउने खतरा आइलाग्ने निश्चित छ । कमसेकम आजको वास्तविकता यही हो
सन् २०१७ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट भड्कएको र विरक्तिएको देश विरोधी शक्ति यतिबेला निकै जोडबलका साथ सक्रिय भएर राजनीतिक स्थितिलाई धमिलो बनाएर माछा मार्ने कुचेष्टा गर्दैछ । शुरुमै नेकपाका दुई पाइलट केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड) देखि केन्द्रीय समितिका सदस्य र संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु जो नेकपालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन, उनीहरुले यो वास्तविकतालाई गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ । क्षणिकको आवेग वा रिसले सिँगो आन्दोलनमाथि घात गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुन सक्दैन । सरकारका पछिल्ला कतिपय क्रियाकलापमा ढंग पुगेको पक्कै छैन । माथि उल्लेख गरिएका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुका बेढंगका वेवारिसे र वाहियात लाग्ने टिप्पणीले स्थितिलाई अरु बढी तनावतिर लगेको तथ्यलाई स्मरण गरेर तत्कालै दुई पाइलटले पार्टी संयन्त्र र सरकारलाई सम्हाल्न किमार्थ ढिला गर्नु हुँदैन ।
सत्तारुढ दलभित्र थुप्रै राजनीतिक आग्रह र सीमाको भारले नै पछिल्लो स्थिति देखिएको हो भन्ने तथ्यलाई सबैभन्दा माथिबाट सहज रुपमा आत्मसात गर्नु पर्दछ । तत्कालीन समयमा गरिएको एकताको घोषणा केवल चुनाव जित्न र कसैको निधारमा अविर वा गलामा केही किलो वजनका माला लगाउनका लागि गरिएको नै होइन । समग्रतामा ६ दशक भन्दा लामो राजनीतिक दुष्चक्रलाई तोडेर नेपाललाई नयाँ अवस्थामा खडा गर्न एकता भएको थियो । यस्तो महान उद्धेश्यभित्र जनताको जीवनस्तरमा तीव्र ढंगले सुधार गर्दै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सुस्पष्ट ढंगले संरक्षण नै हो । यी उद्धेश्य पूरा गर्न पुराना बानी, आदत र कुलतबाट मुख्यतः नेतृत्वपंक्ति र त्यसको वरिपरिको घेरा नै मुक्त हुनु पर्दछ ।
राम्रोजति सबै आफ्नो झोलीमा हालेर भट्टीमा कुर्लने तर नराम्रो जति अरुको थाप्लोमा थोपर्ने कुलतबाट मुक्त नभएका कारणले सरकार बनेको डेढ वर्ष नपुग्दै अस्थिरताजन्य क्रियाकलापको प्रहसन हुन थालेको छ । त्यसलाई मलजल गर्ने काम सरकारकै अधिकारीहरुबाट भएको तथ्यलाई नेतृत्वले राम्रोसँग महसुस गरेर सुधार गर्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसका साथसाथै विभिन्न शक्ति केन्द्र र सत्तारुढ वर्ग विरोधी पक्षको हर्कत समाप्त भएको थिएन र छैन । केवल त्यस्ता शक्तिहरुले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्ने शैली बदलेका छन । पात्रहरु फेरिएका छन, तर संस्थाहरु यथावत अरु बढी आक्रमक र लोमहर्षक तरिकाले सक्रिय भएका छन् । दुर्भाग्य सत्तारुढ दलभित्रका जिम्मेवारहरुले पूराना र अरुले बोकाएका भारी यथावत बोकिरहका त छैनन ? के सत्तारुढ दलका जिम्मेवारहरुलाई अझै विश्वास छैन ? कि पार्टी एकता भएकै छैन भन्ने त लागेको छैन ? पछिल्ला केही व्यवहार, उनीहरुको सँगत र तौरतरिकाले त्यही कुरालाई नांगो रुपमा देखाएको छैन र ?
सरकारले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार थुप्रै कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक थियो । यसमा कसैको दुई मत हुनै सक्दैन । तर कानुन बनाउँदा कथित सुन्दर भनिएको संसदीय प्रजातन्त्रका केही पक्षहरुमाथि ध्यान दिनै पर्दछ । ती प्रक्रिया जतिसुकै पट्यारलाग्दा भएपनि झेल्नै पर्दछ । त्यो कानुनले भनेको छ कि छैन भन्नेतर्फ जानै हुँदैन । विगतमा हामीले नै के भन्यौं ? र के कुराको सवैभन्दा बढी जोडसँग माग गर्दै आयौं भन्नेतर्फ हेक्का राख्नु पर्दछ । पछिल्लो समय मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकार र सत्तारुढ दललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायका अगाडि बद्नाम गर्ने सुविचारित योजनामा फ्यांकिएको जाल थियो । आखिर भयो त्यही नै । त्यसको जसरी पेश गरियो, समय र सन्दर्भका हिसावले पनि कुनै आवश्यकता थिएन । सच्याउने काम नेतृत्वपंक्तिबाटै आयो । तर बदनाम गराएरै छाड्यो ।
जहाँसम्म गुठी सम्वन्धी विधेयकको सन्दर्भ छ । त्यो अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर त्यसभन्दा पहिले सरकारले देशभर गुठीको अवस्था र स्थिति कस्तो छ भन्ने बारेमा सर्वदलीय संसदीय समिति बनाएर आवश्यक सुझाव समेत पेश गर्ने गरी काम गराउनु पर्दथ्यो । त्यसो गर्दा संसदभित्रको भाँडभैलो त्यसै टर्ने थियो । विगतमा कुनै राजा वा महराजाले बकसमा दिएको भरमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने सामन्त र नवएलिटहरुको नकाव पनि त्यही समितिको प्रतिवेदनले संसदीय भाषामा नै उतार्ने निश्चित थियो । त्यसबाहेक नेपालको धर्म, संस्कार र परम्परामा आधारित गुठीका सन्दर्भमा त सरकारले अरु बढी सहयोग गर्न तयार नहुने कुरै हुने थिएन । अहिले कथित गुठी संरक्षणका नाममा विदेशी राशनपानीमा जीवन यापन गरेकाहरुदेखि राजा रजौटाको चाकडीमा जीवन विताएका पहिलेका दास हालका नव सामन्तहरु नांगै–भुतुंगै सडकमा उफ्रेका छन । तिनलाई विगतमा अहिले सत्तारुढ भएको दलका कतिपय पात्रहरुले समेत पुल्पुलाएर सत्तारुढभित्रकै अर्को पक्षलाई ठिक पार्ने कथित मनसुवामा धाप मारिएका पात्र पनि छन् ।
राज्यको सम्पत्तिमा माथि राईंदाईं गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुंदैन । कोही कसैले घर त के गोठमा पनि बस्न नपाउने, अर्कोले राज्यको सम्पत्तिमाथि हैकम जमाएर दादागिरी गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नै पर्दछ । त्यो अहिले रोकिए पनि आगामी दिनमा गर्नै पर्दछ । तर त्यही काम गर्न सरोकारवालाहरु सबै पक्षसँग यथोचित सम्वाद र छलफलको आवश्कयता पर्दछ । त्यो प्रक्रिया पूरा नगरीकन झण्डै दुई तिहाई जनमत भएको सरकारले किन कसैलाई सोध्ने भन्ने जस्तो प्रवृति वर्तमान सरकारले पाल्नै हुंदैन । किन कि अहिलेको व्यवस्था र आम सहभागिताको लोकतन्त्र वर्तमान सत्तारुढ दलले समेत निकै लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको विषय हो । यस्तो संवेदनशीलतालाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न परिपक्क र बरिष्ठ नेताहरु सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने बल्ल महसुस भएको हुनु पर्दछ । संसदको द्धार टेक्न पाएको छैन, मन्त्रीको झण्डा र गाडीको फण्डामा परेकाहरुबाट जतिसुकै सही नियत भएपनि उपरोक्त प्रकारको संवेदनशील कार्य सम्पादन सम्भव नै थिएन । आखिर व्यवहारले पनि त्यही प्रमाणित गर्यो ।
यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जति गम्भीर बनाएको होला, त्यसको कैयौं गुना बढी आघात देश राजनीतिक स्थिरताको सुगम बाटोमा प्रवेश गरेको खुशी मनाउने नेपाली जनतामा परेको हुनु पर्दछ । यद्यपी अवसर समाप्त भएको वा गम्भीर दुर्घटना उन्मुख भएको निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने कुनै कारण छैन । केवल प्राचीन राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्यको यो वाक्यको हेक्का मात्र राखे र तदनुकूलको व्यवहार शुरु भने गर्नै पर्दछ । इतिहासले पटक–पटक एउटै गल्ती दोहोर्याउने र वर्चस्व कायम गर्ने मनसुवा हमेसा आत्मघाती हुन्छ । यस्तो सुुविधा लिने मूर्खता राजनीतिज्ञले गर्नु हुँदैन । चाणक्यको यो नीति सूतक सबैभन्दा बढी नेकपाका दुई पाइलट र पाइलटको उपाधिबाट बन्चित भएर कुण्ठित बनेका सचिवालयभित्रका सबैले सबैभन्दा बढी महसुस गर्नु पर्दछ ।
पछिल्लो समय बाह्य शक्ति केन्द्रले नेपाललाई अस्थिरताको बाटो लैजाने नयाँ तरिका अपनाएको छ । उसले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भन्दा बढी समाजका विभिन्न अंगहरुलाई प्रभावमा लिएर सत्ताका विरुद्ध जनमत बनाउने दिशामा कैयौं गुना बढी लगानी गरिरहेको छ । यसै प्रसँगमा कांग्रेसी विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले एउटा कुरा ठिकै भनेको छन, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्राप्त सूचनाकै आधारमा बोलेका हुन् भने कुनै पनि निकायले उनलाई सही सूचना दिइरहेका छैनन् । सूचना दिनेहरूले खाल्डो खनिरहेका छन् । वास्तवमा यो सत्य देखिंदैछ । तर सम्पूर्णरुपमा केही विग्रिहालेको छैन । यथा समयमा नै तुफान आउनु अघिको संकेतलाई बुुझ्ने वित्तिकै सत्ता र सत्तारुढ दल सही बाटोमा अघि बढीहाल्छ । सरकार बनेदेखि अहिलेको समयलाई मसिनो तरिकाले विश्लेषण गरेर सरकार बन्ने बेलातिर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको सुझाव र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भहरुलाई स्मरण गरेर तदनुकूल अघि बढ्न भने अब ढिला गर्नु हुंदैन ।
जसरी विदेश मामिलाका सन्दर्भमा मित्र भन्दा बढी स्वार्थ भएजस्तै सत्ताको संरक्षण र जनतको सत्ताको बचाउका लागि गुटगत निकटता भन्दा बृहत्तर क्षमता र प्रतिभावान टिमको आवश्यकता सबैभन्दा बढी टड्कारो देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको मात्र दोष मान्नु सर्वथा गलत हुनेछ । त्यसैगरी अव पुराना दुई पार्टीका पूवर्वत मान्यता र निकटताको रुझान बन्द गर्न पनि ओली–प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी तयार हुनु पर्दछ । सँगसँगै पूर्व एमालेभित्रका बनिबनाउ गुटहरुको विघटन गर्न आवश्यक छ ।
बारम्वारको परीक्षामा अनुर्तीण तर फेरि सुंड घुसार्ने प्रवृत्तिका नेताहरुलाई दोस्रो पुस्ताका नेता साथीहरुले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर पार्टीलाई सही दिशामा लैजान मूल नेतृत्वलाई सघाएर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । युवा नेता तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भनेजस्तै ओलीको डुंगा डुवाउने कुचेष्टा गर्दा कोही सकुशल बाँकी रहंदैन । ठीक त्यसैगरी ओलीलाई अप्ठेरो पार्नेहरुलाई किन सहज बनाइदिने भन्ने कसैले सोचेमा त्यो भन्दा ठूलो अपराध अरु केही हुने छैन । यतिबेला ओलीलाई कसैले अप्ठेरो पारेको छ भने सबैभन्दा निकटताको ढोंग गर्नेहरुबाट भइरहेको वास्तविकता कमसेकम ओलीलाई अवगत नै हुनु पर्दछ । घोषित रुपमा अप्ठेरो पार्न चाहने सबै प्रकारका शक्ति र पात्र चिन्हित नै थिए । तर ओलीको सन्निकट बताइएकाहरुबाट यति ठूलो घात होला भन्ने शायद ओलीलाई पनि कल्पना थिएन ।
यसमा प्रधानमन्त्रीको मात्र दोष मान्नु सर्वथा गलत हुनेछ । त्यसैगरी अव पुराना दुई पार्टीका पूवर्वत मान्यता र निकटताको रुझान बन्द गर्न पनि ओली–प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी तयार हुनु पर्दछ । सँगसँगै पूर्व एमालेभित्रका बनिबनाउ गुटहरुको विघटन गर्न आवश्यक छ
जहांसम्म पार्टी एकता र त्यसका सन्दर्भमा भएको सहमति वा सम्झौताहरु छन् । ती एकताका प्रमुख आधार हुन् । तिनको परिमार्जन वा संशोधन वा यथावत लागू गर्ने जिम्मेवारी मूलतः ओली र प्रचण्डको हो । त्यसपछि मात्रै सचिवालय वा स्थायी समितिमा परामर्श गर्न सकिन्छ । किनकि आगामी पार्टी महाधिवेशनसम्मको रोडम्याप तिनै सम्झौता र सहमतिमा प्रष्ट गरिएको छ । साविकका दुईवटै पार्टीका स्थायी समितिहरुले तिनलाई अनुमोदन गरेको तथ्य हालै मात्र पंक्तिकारसँगको अन्तर्वार्तामा योगेश भट्टराईले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
ओली इतर पक्ष करार गरिएका भट्टराईले नै सुस्पष्ट ढंगले त्यसप्रकारको व्याख्या गरेपछि पूर्वएमाले पंक्तिमा कसैले निहुं खोज्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । त्यो अन्तर्वार्ता एबीसीको युट्युवमा जतिबेला पनि हेर्न सकिन्छ । सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि नै गरिएको हो । माधव नेपालले अवतरण पुस्तकमा भनेजस्तो झुक्याउनका लागि किमार्थ होइन । माधव नेपालले तितो पोखिरहेर गुलियो चाट्ने प्रवृत्ति भने त्याग्नै पर्दछ । एकतादेखि अहिलेसम्म पार्टीमा माधव नेपाल सहितका नेताहरुको गतिविधिलाई मसिनोगरी सम्वन्धितहरुले नै पुनरावलोकन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । केवल ओली र प्रचण्डका बीचमा सुंड घुसार्ने दाउ वा उनीहरुमाथि दोष थोपर्ने काम भन्दा आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नु बढी लाभदायक हुनेछ ।
ठीक त्यसैगरी पूर्वमाओवादी पक्षधरबाट मौन रुपमा एकताको डोरीलाई चुंडाएर ०७३ सालतिर फर्कने कुचेष्टा बोकेका केही पात्र र प्रवृत्ति हुन सक्छन । तर ती कुनै पनि हालतमा मुखर हुन सम्भव नै छैन । एकता प्रक्रियामा ओली र प्रचण्ड बाहेक सबै बरिष्ठहरु सहायक हुन् । त्यो अवस्थामा किनारामा धकेलिएको सन्दर्भमा भएको एकतामा नाच्नेहरु आगामी महाधिवेशनसम्म सहायक नै भएर एकतालाई सघाउनु बाहेक अर्को कुनै इमान्दारिताको सूचक हुंदैन । यतिबेला सरकारका एकाध कमिकमजोरी वा डेलिभरि दिन नसकेको कुराहरु सच्याउन सकिने सहायक पक्ष हुन् । यद्यपी तिनलाई यथाशिघ्र सच्याउनै पर्दछ ।
प्रमुख पक्ष भनेको सकेसम्म छिटो एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र सरकारलाई सफल पार्न पार्टीका सबै संयन्त्र सक्रिय रुपमा क्रियाशील हुनु नै हो । पार्टी मजबुत र एकताले तार्किक निश्कर्ष पाउँदा अहिले कुनै अवसर वा भाउ नपाएकाहरुले आगामी केही दशकसम्म पटक पटक अवसरै अवसर पाउनेछन् । तर एकतालाई खल्वल्याउन खोज्दा कसैले कुनै अवसर त के देउवाको भाषामा कम्युनिस्टहरुले बाहिर निस्केर रुन पनि नपाउने खतरा आइलाग्ने निश्चित छ । कमसेकम आजको वास्तविकता यही हो । यी इतिहास र पार्टी एकतापछिको झण्डै डेढ वर्षको अनुभवलाई आत्मसात गर्नु नै नेकपाका नेताहरुको पहिलो काम बन्न पुगेको हो कि ?
(नेकपाको एकताको बिषयमा सवैभन्दा बढी जानकार पात्र एवं एकताका सुत्रधार एवीसी मिडिया ग्रुपका प्रमुख कँडेल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
सुदरपश्चिममा धमामधम प्रचण्डको हस्ती भित्र्याउँदै लेखराज भट्ट, माओवादी उपाध्यक्ष नै एमाले प्रवेश
कैलाली, माघ ६ । पछिल्लो समय सुदुरपच्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली हस्तीहरु धमाधम एमाले
काठमाडौं, माघ ६ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने
मुलुक बर्वाद बनाउने मिसनमा देउवा सरकार, मन्त्री नै दिन थाले बिपक्षी नेताको हत्या गर्ने सार्वजनिक धम्की
काठमाडौं, माघ ६ । पाँच दलीय गठबन्धन मुलुकमा अराजकता मच्चाएर लुटको शासन चलाउन लागिरहेको तथ्यहरु